Walaalayaal bacda salaan mahad oo dhan Alle ayaa iska leh, nabad gelyo iyo naxariista Eebbana dushiisa ha ahaato rasuulkeena Muxammad, ehelkiisa, asxaabtiisa, iyo intii xaqqa ku raacday dhammaantood.
Intaa dabadeed waxaan mahad aad u ballaaran usoo jeedineynaa walaalihii kaalinta weyn ka geystay dhismaha dhulka Agoonta Xarunta Ugaas Khaliif ee B/weyne rag iyo dumarba, iyagoo Alle uu sabab uga dhigay inuu dhismuhu soo gaaro heer dhamaad ah.
Guddiga ku howlan dhismahaan oo uu ugu horeeyo Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif ayaa in badan baaq codsi dhaqaale u soo jeediyay jaaliyadaha soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisaba si loo dhameys tiro dhismaha agoonta, haddaba Jaaliyadda reer hiiraan ee wadanka Norway ayaa maanta soo gaarsiiyay guddiga dhismaha Agoonta deeq lacageed, deeqdaas oo gaareysa $2000 (laba kun doolar), wax ka wanaagsan Allaha ugu abaal gudo wixii ay la baxeen, sadaqadoodana Allaha ku dhowro (Aamiin).
Reer Norway qorshahoodu ma ahayn iney maanta ama berrito midkood ay lacagtaan diraan, oo waxay wadeen qorshe ay intaan ka badan ku aruurinayeen, balse waxaa soo dedejiyay oo sabab u ahaa markii saaka la waayay $230 oo howlo yar yar oo weli harsan lagu qaban lahaa, guddigii dhismahana ay lasoo xiriireen walaalaha norway, bal haddii ay wax ku tari karaan ay arrinkaa uga caawiyaan.
Howshii dhismaha waxaa la dhihi karaa 95% waa dhamaatay, waloow ay jiraan howlo yar oo weli harsan, howshaas oo aan dhaqaale sidaa usii buuran u baahan doonin insha'llaahu, hadda waxaa lagu jiraa u diyaar garoow iyo qabanqaabadii xafladda furitaanka xarunta cusub, taasoo lagu wado iney ka dhacdo gudaha xaruntaan cusub ee Agoonta Ugaas Khaliif, sidoo kale waxay xaflad middaas la mid ah ka dhici doontaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, taasoo uu howsheeda wado Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif, waxaana lagu wadaa iney kasoo qeyb geli doonaan dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan, iyo media-da Universal TV, Somali Channel TV, Royal TV, Horn Cable TV, Jaraa'idada Caalamka iyo Idaacaha maxalliga, I.W.M, waxaana lagu soo bandhigi doonaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee dhismahaas cusub.
Warbixintii ugu dambeysay ee guddiga dhismaha berrito ayaad heli doontaan haddi Alle idmo, waayo suurta gal ma noqon in isla maanta leydin soo bandhigo warbixintii ugu dambeysay ee dhaqaalaha iyo deyntii lagu lahaa, waxaanse fileynaa in deyntii hore ee nagu harsaneyd ay reer Norway kheyr Alla siiyee ay naga gudeen, waxa yar yar ee haray oo maalin walba loo siibaahanayo walaalaha kale ayaan fileynaa iney iyaguna dhameystiri doonaan insha'allaahu.
Haddaba walaalaha muslimiinta waxaan si naxariis iyo alle ka cabsi ku dheehan tahay idiinka codsaneynaa waxa Alla idiin dhiibay inaad wax uga sadaqeysataan, waa agoomo Alle ka sokoow gacantiina u baahan, si dhismuhu u noqdo mid mira dhala, agoontuna ugu nacfiso oo ay kaga kaaftoonto ijaarkii muddada dheer soo jiitamaayay iyo jiingadihii kuleylka badnaa ee ay subax iyo galab wax ku baranayeen.